Sheekh Cali Jabal “Qabri kasta oo alle sokokadiis la caabudo waan Burburi doonaa ilaa Muqdisho ka noqoto meel ka maran Shirkiga | Halganka Online
SIDEE LOO GALAY XABAALIHII MAQAAL XIISA BADAN ? by Khadar C/laahi Badeed
Sh C/Qaadir Mu’min oo xalay Muxaadaro aad u qiimo badan oo ciwaankeedu ahaa (QALADAAD KU JIRA CAQIIDADA) ka soo jeediyey Masjidka Arraxmah ee ku yaala Magaalada Birmingham UK.
Duulaan Maskaxeedka lag u hayo muslimiinta.
Fashilkii ugu weynaa ee ku yimaada laanta sirdoonka mareykanka(CIA)
Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab oo si buuxda u joojiyey howlihii Hey’adda WFP ee dalka soomaaliya ( warsaxaafadeed)
Abshir Bacadle "Xamid Karzaay ayaa dhaama qolada Dowlada sheegata ee Cadawga AMISOM hoos fadhida".
Idaacad Islaami ah oo markii ugu horeysey shalay laga hirgeliyay Wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud.
Sheekh Cali Jabal “Qabri kasta oo alle sokokadiis la caabudo waan Burburi doonaa ilaa Muqdisho ka noqoto meel ka maran Shirkiga
Posted on Maarso 24, 2010 by halganka
Wilaayada islaamiga Xarakada Shabaabul Mujaahidiin Gobalka Banaadir ayaa balan qaaday in ay sii wedi doonto burburinta ay ku hayso qabuuraha ay qaabka shirkiyaadka ah u caabudaan dadka waxmagaratada ah.
Sheekh Cali Max’med Xuseen waaliga wilaayada islaamiga gobalka Banaadir oo lahadlayay saxaafadda ayaa sheegay in Shabaabul Mujaahidiin ay dhulka lasimi doonto dhamaanba qabuuraha alle ka soke la cuubudo.
Sheekh Cali Jabal oo ka hadlaya Munaasabadii shalay
saxaafada ayaa waaliga weydiisay sida ay ka yeelayaan qabuuraha Biya maalow iyo kuwa kuyaal Masjidka Cawa iyo Caraweelo wuxuuna sheegay in cidna aan lagu xushmay doonin Burburinta waxyaabaha shirkiyaadka ah ee Muqdisho ka jira dhawaan lasoo afjari doono howlahaasi.
Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa Shalay Burbburiyay Qabriyo ay Dadku caabudi jireen iyo kuwa kale oo ay ku aasnaayeen Gaalo horay usoo gumaysatay Shacabka Soomaaliyeed ee Muslimka ah.
« Maqaal//Markii Fatwadu Ku Xirnaato Hadba Dalabka Mareykanka Dowlada Uganda oo Ciidan Badala kuwa kaga go’doonsan Muqdisho iyo kuwa ku halaagsamay u soo direysa Muqdisho. »
AHMED,OHIO, on Maarso 27, 2010 at 5:05 g said:
ASC,ALLAHU AKBAR anigaan ayaa nimakani ku jiri jiray lkn waagi ETHIOPIA troops ee soo galeen dalkaayaa ilaahay xaqa i tusay beena maaahan in ay caabudaan anigaan ayaa idinka hubo ee awthaantu wsc.